ငါးပြတိုက်များအတွက်အကောင်းဆုံး silicones များ: နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လမ်းညွှန် | ငါးများ
နာတာလီယာ ချယ်ရီ | | DIY ငါးမွေးကန်
သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ၊ ငါးပြတိုက်များအတွက်ဆီလီကွန်သည်မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲရှိသင့်သောအခြေခံတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်တွင်ရုတ်တရက်ယိုစိမ့်မှုတစ်ခုပေါ်လာပြီးရေဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်သည်အလုံးစုံရေစိုခံနိုင်ပြီးအထူးပြင်ဆင်ထားလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးများ၏ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်ပါ။
ဤဆောင်းပါး၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်ဆီလီကွန်ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုကြည့်ပါမည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အရောင်များနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးထုတ်ကုန်များ ၀ ယ်နိုင်သည့်နေရာ။ ထို့အပြင်သင်သည် DIY ငါးပြတိုက်များ၏ဤအကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းဤအခြားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုသည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရေငန်ငါးမွေးကန်တည်ဆောက်ခြင်း.
2 ငါးပြတိုက်ဆီလီကွန်သည်အဘယ်ကြောင့်ထူးခြားသနည်း၊ သင်မည်သည့်ဆီလီကွန်ကိုမဆို သုံး၍ မရပါ။
7 အကောင်းဆုံး Aquarium Silicone အမှတ်တံဆိပ်များ
8 စျေးသက်သာတဲ့ငါးပြတိုက်ဆီလီကွန်ကိုဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ
ရွေးချယ်မှုတွင်အမှားမပါစေရန်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပြသနာမရှိသောအကောင်းဆုံးငါးပြတိုက် silicones အချို့ကိုတိုက်ရိုက်ပြုစုခဲ့သည်။
Soudal - ကျည်တောင့် ...
ငါးပြတိုက်ဆီလီကွန်သည်အဘယ်ကြောင့်ထူးခြားသနည်း၊ သင်မည်သည့်ဆီလီကွန်ကိုမဆို သုံး၍ မရပါ။
ငါးပြတိုက်ဆီလီကွန်သည်ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနေသောငါးပြတိုက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း (သို့) အသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ gluing သို့မဟုတ်စွဲစေသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောအခြားထုတ်ကုန်များရှိသော်လည်းဆီလီကွန်သည်လွန်ကဲသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်သော၎င်းသည်စံပြဖြစ်သောကြောင့်ဆီလီကွန်သည်သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲအသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ စကားမစပ်၊ ဒီပစ္စည်းကို acrylic ငါးပြတိုက်တွေမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဖန်နဲ့လုပ်ထားတယ်။
သို့သျောလညျး စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သောဆီလီကွန်များအားလုံးကိုငါးပြတိုက်တစ်ခုတွင်သုံးရန်လုံခြုံသည်မဟုတ်ပါ၎င်းတို့တွင်သင်၏ငါးများ၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သောဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်မှိုသတ်ဆေးအချို့ပါ ၀ င်သည်။ မူအရအညွှန်းက ၁၀၀% ဆီလီကွန်သည်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းပြသောလက္ခဏာဖြစ်သော်လည်းငါးပြတိုက်များတွင်သုံးရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆီလီကွန်ကို acetic သို့မဟုတ် neutral ဖြစ်စေသောအုပ်စုကြီးနှစ်ခုသို့ခွဲနိုင်သည်။ ပထမကိစ္စတွင်၎င်းသည်အက်ဆစ်များကိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီးရှာလကာရည်နှင့်အလွန်ထူးခြားသောအနံ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောငါးများကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးအခြောက်ခံရန်ကြာမြင့်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Neutral silicone သည်မည်သည့်အက်စစ်အမျိုးအစားကိုမဆိုထုတ်လွှတ်သည်၊ အနံ့မခံဘဲလျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ ၎င်းကိုငါးပြတိုက်တစ်ခုတွင်သုံးနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုအစိတ်အပိုင်းများသည်ထုတ်လုပ်သူများအကြားပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုသုံးရန်ပိုအကြံပြုသည်။ အထူး silicones များကိုငါးပြတိုက်များတွင်သုံးရန်အထူးရည်ရွယ်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မျှော်လင့်မထားသောကြောက်ရွံ့ခြင်းများကိုရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်ဝယ်သောဆီလီကွန်သည်ငါးပြတိုက်များအတွက်အထူးသင့်တော်သရွေ့၊ ဆိုလိုသည် သင့်ငါး၏အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သောဓာတုပစ္စည်းများမသယ်ဆောင်ပါနှင့်ဆီလီကွန်တွင်အရောင်တစ်မျိုးသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောအနုပညာစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးအများဆုံး (မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်ကဲ့သို့အခြားသူများရှိသော်လည်း) အဖြူရောင်၊ ပွင့်လင်းသောသို့မဟုတ်အနက်ရောင်စီလီကွန်အရောင်များရှိသည်။
ငါးပြတိုက်များအတွက်အကြံပြုဆုံးဆီလီကွန်အရောင်သည်သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲပွင့်လင်းသည်။ မင်းရဲ့ငါးပြတိုက်ကဘာအရောင်လဲအရေးမကြီးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ရေနဲ့ဖန်ခွက်ထဲမှာကောင်းကောင်းရောစပ်သွားလိမ့်မယ်။ မည်သည့်အရာကိုမဆိုကပ်ရန် (သို့) မည်သည့်ပြုပြင်မှုကိုမဆိုသုံးနိုင်သည်၊ ၎င်း၏နတ္ထိအရောင်မရှိခြင်းကြောင့်သင်ဘာကိုမှသတိထားမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဖြူရောင်ကဲ့သို့အနက်ရောင်ဆီလီကွန်သည်သင်၏အရသာနှင့်သင်၏ငါးပြတိုက်၏အရောင်ပေါ်မူတည်သည်။ yayas ပြောသည့်အတိုင်းအနက်ရောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာသည်၎င်းသည်အလွန်နာကျင်သောအရောင်တစ်ခုဖြစ်သည် သင်ကဲ့သို့နောက်ခံတစ်ခုခုကဲ့သို့မှောင်မိုက်သောနေရာတွင်ဖုံးကွယ်ရန်သို့မဟုတ်အလှဆင်ရန်ကပ်လိုလျှင်၎င်းသည်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်.
ဆီလီကွန် ငါးပြတိုက်များကိုပြုပြင်ရန်အလွန်ကောင်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၎င်းကိုသင်မကျင့်သုံးနိုင်ပါ၊ အခြေအနေများနှင့်မည်သို့ရှေ့ဆက်ရမည်ကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်က second hand aquarium ကို ၀ ယ်ပြီးပြီဆိုရင်အက်ကြောင်းများမရှိကြောင်းသေချာပါစေ၊ ဆီလီကွန်ဖြင့်အရင်ပြုပြင်ပါ။
ထက်သာတယ် မသွားခင်ငါးပြတိုက်ကိုအလွတ်ထားပါဆီလီကွန်လိမ်းရမည့်မျက်နှာပြင်သည်သန့်ရှင်း။ ခြောက်သွေ့ရန်လိုအပ်ပြီးအခြောက်ခံရန်လိုသည်။
ငါးပြတိုက်တစ်ခုလုံးကိုသင်မပစ်ချင်ပါက၊ ဤအရာ၌သင်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ စီလီကွန်အရည်ကိုရေထဲသို့မပစ်ရန်အလွန်သတိထားပါ (သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အတိုင်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမထောက်ခံပါ) ။
သင်သွားလျှင် ဖန်ခွက်ကိုပြုပြင်ပါ ယခင်ကဆီလီကွန်ဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သောအရာဟောင်းများကိုဓားနှင့် acetone တို့ဖြင့်သန့်ရှင်းပါ။ ၎င်းကိုမပြုပြင်မီကောင်းစွာအခြောက်ခံပါ။
အလားတူပင် မင်းကဖန်ခွက်နှစ်ခုကိုဆီလီကွန်နဲ့တွဲမယ်၊ နှစ်ခုကြားတွင်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိနေကြောင်းသေချာပါစေ။ ဖန်ခွက်သည်အခြားဖန်ခွက်နှင့်ထိတွေ့လျှင်၎င်းသည်အပူချိန်အပြောင်းအလဲကြောင့်၎င်းတို့ကျုံ့သွားလျှင်သို့မဟုတ်ချဲ့လျှင်အက်ကွဲနိုင်သည်။
ပြုပြင်ခြင်း အတွင်းအပြင် ထို့ကြောင့်ဆီလီကွန်သည်အက်ကွဲကြောင်းကိုအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
နောက်ဆုံးတော့ အခြောက်ထားပါ သင်လိုအပ်သရွေ့
၎င်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်ဆီလီကွန်ကိုလုံးဝခြောက်သွေ့စေလိမ့်မည်မဟုတ်လျှင်သင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့လျှင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤထုတ်ကုန်၏အခြောက်ခံခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုသင်လေးစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည် ၂၄ နာရီနှင့် ၄၈ နာရီကြားတွင်ဖြစ်တတ်သည်.
အကောင်းဆုံး Aquarium Silicone အမှတ်တံဆိပ်များ
ဈေးကွက်ထဲမှာငါတို့တွေ့တယ် silicone အမှတ်အသားများစွာထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်အတွက်စံပြတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါစာရင်းတွင်အထောက်ခံဆုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Olivé silicones များသည်တစ်ခုဖြစ်သည် ဆောက်လုပ်ရေးလောကတွင်ဂန္ထဝင် ငါးပြတိုက်များအတွက်၎င်း၏လိုင်းသည်အခြောက်မြန်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောစေးကပ်မှုနှင့်ကျုံ့နိုင်မှုတို့အတွက်ပေါ်လွင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အိုမင်းခြင်းကိုကောင်းစွာတွန်းလှန်သောကြောင့်ထုတ်ကုန်သည်၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်လိမ့်မည်။ ဤအမျိုးအစား၏ဆီလီကွန်အားလုံးကဲ့သို့ဤထုတ်ကုန်သည်ဖန်သားကိုကပ်ရန်သုံးသည်။
Rubson Verre ငါးပြတိုက် -...
ဤစိတ်ဝင်စားစရာအမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၊ အထူးသဖြင့်ငါးပြတိုက်များကိုရည်ရွယ်သည်ဟုကြေငြာသည် ရေဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးရေငန်ငါးပြတိုက်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်မရ။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးဖန်သားနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်ငါးပြတိုက်များ၊ ငါးသိုလှောင်ကန်များ၊ ဖန်လုံအိမ်များ၊ ပြတင်းပေါက်များကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်မီးချောင်းများမှ UV ရောင်ခြည်ကိုခုခံနိုင်သဖြင့်၎င်းသည်လိုက်နာမှုကိုမဆုံးရှုံးစေပါ။
ဆိုဒယ်လ် ငါးပြတိုက်များအတွက်ပွင့်လင်းပြီးစံပြထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားသည်၎င်းသည်အပူချိန်အပြောင်းအလဲများကိုအထူးခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုကြေငြာသည်။ ၎င်းသည် silicones အများစုကဲ့သို့ဖန်များကိုဖန်များနှင့်ပေါင်းစည်းရန်သာအလုပ်လုပ်ပြီးအရောင်ခြယ်။ မရပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော adhesion အဆင့်ရှိသည်။
ဒီအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးကတော့ငါးပြတိုက်တွေအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အပြင်၊ cannula တွင်ကွဲပြားသောနေရာများစွာတွင်ထည့်ထားနိုင်သော built-in cannula ရှိသည်၎င်းသည်အသေးဆုံးအက်ကွဲကြောင်းများကိုပြုပြင်ရန်နှင့်သေနတ်ကိုသုံးရန်မလိုဘဲ၎င်းကိုစံပြုစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လျင်မြန်စွာခန်းခြောက်ပြီးယိုစိမ့်မှုအမျိုးမျိုးကိုကာကွယ်ပေးသည်။
ထိုအခါငါတို့သည်အတူတက်အဆုံးသတ် ငါးပြတိုက်များကိုရည်ရွယ်သည့် silicones များကိုထုတ်လုပ်ရုံသာမကအခြားအလွန်ထောက်ခံသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်မှာအများကြီးသုံးပါတယ်။ Wurth ဆီလီကွန်သည်အခြောက်ခံရန်အလွန်လျင်မြန်သည်၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအရုပ်ဆိုးမသွားဘဲမြင့်လာပြီးအနိမ့်ဆုံးအပူချိန်ကိုခုခံကာအလွန်ကပ်စေးကပ်လာသည်။ သို့သော်သင်သည်အခြောက်ခံနေစဉ်သတိထားသင့်ပြီးပုလင်းပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောဆီလီကွန်ကိုအပူချိန်တွင်ထားပါ။
ဒီကုန်အမှတ်တံဆိပ် DIY ထုတ်ကုန်အထူးကု ငါးမွေးကန်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆီလီကွန်ပါရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်း၏လျင်မြန်ခြောက်သွေ့သောအချိန်အတွက်ရော၊ မှန်နှင့်သာမကအလူမီနီယမ်နှင့် PVC နှင့်ပါလိုက်ဖက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး၊ မှိုသတ်ဆေးများမပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အကြံပြုထားသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအမှတ်တံဆိပ်ငါးပြတိုက်များအတွက်အထူးဆီလီကွန် အပြင်မှာသုံးနိုင်ပါတယ်၎င်းသည်ရေနှင့်ရာသီဥတုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ခံနိုင်သောအနံ့ရှိသည်၊ အလွန်ပျော့ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဖန်ခွက်၌ကောင်းစွာကပ်သည်၊ ၎င်းသည်ငါးပြတိုက်များကိုပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်တည်ဆောက်ရန်သင့်တော်သည်။
စျေးသက်သာတဲ့ငါးပြတိုက်ဆီလီကွန်ကိုဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ
တစ်ဦးလည်းမရှိ ငါးပြွန်ဆီလီကွန်ကိုငါတို့ ၀ ယ်နိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီး၎င်း၏ရောင်းအားသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်များအတွက်သာမကန့်သတ်ပါ၊ ၎င်းကို DIY နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအထူးပြုနေရာများတွင်လည်းတွေ့နိုင်ပါသည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ ဝင်ပါ အမေဇုံ ဆီလီကွန်အမှတ်တံဆိပ်၏စွဲမက်ဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးဆီလီကွန်ကိုရှာဖွေဖို့အခြားသုံးစွဲသူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ မင်းမှာ Prime function ကိုစာချုပ်ချုပ်ထားရင်မင်းအချိန်တိုအတွင်းအိမ်မှာရှိလိမ့်မယ်။
Leroy Merlin အမှန်တော့၎င်း၏အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွင် Orbasil နှင့် Axton အမှတ်တံဆိပ်များမှငါးပြတိုက်များအတွက်တိကျသော silicones နှစ်ခုသာရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဆေးဆိုင်မှာရနိုင်ပါသလား၊ မြန်မြန်ထွက်သွားဖို့အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုလား။
ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာကြိုက်တယ် Carrefour ၎င်းတို့သည်ငါးပြတိုက်များအတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းဆီလီကွန်တံဆိပ်အချို့လည်းရနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ သင်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်။ ၎င်းကို၎င်း၏ Marketplace မှတဆင့်တစ်ကယ်ဝယ်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေရွေးချယ်နိုင်သည်။
En Bricomart ၎င်းတို့သည် Bostik အမှတ်တံဆိပ်မှအနည်းဆုံးငါးပြတိုက်များအတွက်ထူးခြားသော sealant ရှိသည်။ အခြားအလားတူ erbs များကဲ့သို့၊ သင်နှင့်အနီးဆုံးဆိုင်၌ရရှိနိုင်မှုကို၎င်းကောက် ယူ၍ online သို့ ၀ ယ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အတွက် Bauhaus ၎င်းတို့တွင်ငါးပြတိုက်များနှင့် terrarium များအတွက်တစ်ခုတည်းသောပွင့်လင်းသောတိကျသောဆီလီကွန်လည်းရှိသည်၊ ၎င်းကိုအွန်လိုင်းနှင့်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ သင်အွန်လိုင်းအော်ဒါမှာနိုင်သလိုစတိုးမှာယူနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အခြား DIY ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
ငါးပြတိုက်များအတွက်ဆီလီကွန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးပြတိုက်တစ်ခုယိုစိမ့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုမိစေရန်ထိန်းချုပ်ထားရမည့်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုပြောပါ၊ အဲဒါမင်းကြုံဖူးလား။ ဆီလီကွန်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သည့်အတွေ့အကြုံရှိသနည်း။ သင်သတ်မှတ်ထားသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါး၏ » DIY ငါးမွေးကန် » ငါးပြတိုက်ဆီလီကွန်